बुटवलमा उपचाररत कपिलवस्तुका एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु : RajdhaniDaily.com
Home Breaking News बुटवलमा उपचाररत कपिलवस्तुका एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु
बुटवल । बुटवलमा कोरोना संक्रमणबाट एक पुरुषको मृत्यु भएको छ । बुुटवलस्थित लुुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत कपिलवस्तुुका एक पुुरुषको कोरोना शनिबार मृत्यु भएको हो । स्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उनी उपचारको लागि बुुटवल आएका थिए । कपिलवस्तुुको मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का ४२ वर्षिय ति पुुरुषको अस्पतालको आइसियुुमा उपचारको क्रममा मृत्युु भएको हो ।
कोभिड–१९ जाँच गर्दा उनको पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ आएको अस्पतालका डा. तथा कोभिड फोकल पसर्न सुुदर्शन थापाले जानकारी दिए । ति पुुरुषमा निमोनिया देखिएपछि अस्पतालले आइसियुमा राखेर उपचार गरिरहेको थियो । ती बिरामीको शुरुको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपनि जिन एक्सपर्ट गरेर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो । उनको पुनः गरिएको पीसीआर परीक्षणमा पनि रिपोर्ट पोजेटिभ आएको डा. थापाले बताए ।
जनकपुरधाम । धनुषाको शहिदनगर नगरपालिकामा श्रीमानको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा श्रीमतीसहित उनका एक पुरुष मित्रलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । धनुषा शहिदनगर नगरपालिका– ३...
तनहुँ । ईलाका प्रहरी कार्यालय आँबुखैरेनीले स्कुटरमा सवार दुई युवाहरुलाई अबैध १सय६६ थान ...
Not-to-be-missed Kumar Raut - July 6, 2020 0
मुम्बई । अजय देवगनको नयाँ फिल्म मैदान ओटीटी अर्थात् डिजिटल प्लेटर्फमबाट रिलिज हुने कुराले दंग परेका दर्शक फेरि निराश भएका छन् । यो फिल्मलाई...
काठमाडौं । मुलुकमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपालमा अझै तीन महिना फिल्म हल नखोल्ने निष्कर्षमा नेपाल सरकार पुगेको छ । यो खबरले फिल्म हल सञ्चालक...
प्रदेश ७ Sushila Bishwokarma - August 19, 2020 0
डडेलधुरा । भीमदत्त राजमार्गको सहजपुर नजिक पहिरो गई राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । करिब १०० मिटर माथिबाट आएको पहिरोले सडक पुर्ण रुपमा भित्कएको छ...
प्रदेश Dhruba Lamsal - June 6, 2020 0
विदेश Roshan Shrestha - March 30, 2020 0
बर्लिन । जर्मनीको आर्थिक केन्द्र रहेको फ्रान्कफर्ट समेत समेटिने हेस्सी प्रान्तका अर्थ राज्यमन्त्री थोमस साफरले आत्महत्या गर्नु भएको छ । प्रान्तीय गभर्नर भोल्कर बोउफियरका...
बागमती प्रदेशमा बालिकामाथि यौन शोषण बढ्दो
Not-to-be-missed Prem Shyangtan - February 19, 2020 0
चुरे मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा बालिकाहरुमाथि यौन शोषण बढ्दो अवस्थामा रहेको एक रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा बागमतीका अनुसार प्रदेशको १३...
अर्थ राजधानी समाचारदाता - April 29, 2021 0